कात्तिक मसान्तमा सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डको एनएभी बढ्यो
मंसिर १०, काठमाडौं । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डले कात्तिक महीनाको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त विवरण अनुसार फण्डको एनएभी असोज महीनाको तुलनामा कात्तिक महीनामा एनएभी (प्रतिइकाई खुद मूल्यमा) मा वृद्धि भएको छ । एनएभी असोज मसान्तमा रू. १३ दशमलव ९५ रहेकोमा कात्तिक मसान्तमा वृद्धि भएर रू. १४ दशमलव १६ पुगेको हो ।
त्यसैगरी, फण्डले कात्तिक मसान्त सम्ममा रू. ६ करोड १९ लाख ६१ हजार नाफा कमाएको छ । असोज मसान्तको तुलनामा फण्डको नाफा कात्तिक मसान्तसम्ममा ९९ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । फण्डले असोज मसान्तसम्ममा रू. ३ करोड १० लाख २४ हजार नाफा कमाएको थियो ।
कात्तिक महीनामा यस फण्डको आम्दानीमा वृद्धि भएसँगै नाफा बढेको हो । असोज महीनामा फण्डले रू. ४ करोड २३ लाख ८० हजार आम्दानी गरेकोमा कात्तिक महीनामा वृद्धि भएर रू.७ करोड ६४ लाखभन्दा बढी पुगेको छ ।
त्यसैगरी, कम्पनीको सूचीकृत शेयरमा लगानी पनि बढेको छ । असोज मसान्तसम्ममा फण्डले सूचीकृत शेयरमा रू. १ अर्ब ६९ करोड ९७ लाख ५४ हजार लगानी रहेकोमा कात्तिक मसान्त सम्ममा वृद्धि भएर रू. १ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख ४२ हजार पुगेको हो । कात्तिक महीनामा फण्डले लगानी गरेका कम्पनीहरुको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएसँगै सूचीकृत शेयरमा लगानी बढेको हो ।